Sidee Loo Doortaa Iskuul
Helitaanka dugsiga saxda ah ee ilmahaagu waxay noqon kartaa dadaal adag! Midda ugu horraysa ee la tixgelinayo waa waxa adiga kuugu muhiimsan markaad u raadineyso iskuul ilmahaaga.
Tilmaamaha soo socda ayaa loo qaabeeyey iyadoo ay talo laga helay in ka badan 100 waalid iyo daryeeleyaal wixii ku saabsan rajada ay qabaan markay raadinayaan iskuul. U adeegso si aad wax badan uga barato dhinacyada iskuulka ee muhiimka u ah qoysaska kuwaaga oo kale ah iyo sidoo kale eeg tusaalooyinka su'aalaha aad weydiin karto iyo waxyaabaha aad raadin karto si aad u aragto sida iskuulku uga shaqeeyo aagaggan.
Xullo waxyaabaha ugu habboon ardaygaaga iyo qoyskaaga si aad u hesho warqad shaqsiyeed dhammaadka! Waad xajin kartaa xaashidan inta lagu gudajiro raadinta iskuulka si ay kaaga caawiso inaad cunuggaaga ugu hesho iskuul wanaagsan.
Waxa kale oo aad kala soo degi kartaa hageyaga daabacan ee xulashada iskuulka halkan!
Bogga soo socda waxaa ku jira 9 shay oo ka mid ah iskuullada ay waalidiinta maxalliga ahi inta badan sheegaan inay muhiim yihiin. Waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad ka fikirto waxa ay yihiin 3 ama 4 kuwa adiga iyo ilmahaaga ugu muhiimsan, iyo inaad diirada saartid kuwaas marka aad baaritaanka ku sameyneyso dugsiyada. Dhinac kasta guji si aad u aragto waxyaabo aad raadiso & su'aalo aad weyddiiso..
Waxyaabaha aad raadineyso waxaa ka mid ah caddeynta aad ka heli karto astaamaha iskuulka, websaydhada dugsiga, ama markaad booqato dhismaha si aad u aragto sida uu ula kulmayo waxa adiga kuugu muhiimsan.
Su'aalaha la weydiinayo waxaa ka mid ah tusaalooyinka su'aalaha aad weydiin karto si aad si fiican ugu fahamto sida dugsigu ula kulmo meelaha adiga kugu muhiimsan.
Xulo waxyaabaha gaarka ah si aad u raadiso iyo su'aalaha aad weydiinayso adigoo gujinaya sanduuqa calaamadaha ku xiga. Kuwaani waxay markaa ka soo muuqan doonaan warbixintaada shaqsiga ah..
Helitaanka qalabka heer-fasal
Cunugeyga ma la bari doonaa iyadoo la isticmaalayo qalab iyo helitaanka tilmaamo ku habboon fasalkooda? Tusaale ahaan, ma rabi doontid in fasalka 8-aad lagu dhigo xisaabta heerka fasalka 5aad.
Xulo su'aalaha iyo waxyaabaha aad raadineyso ee dareemaya kuwa adiga kuugu muhiimsan inay ka muuqdaan bogga natiijooyinkaaga shaqsiyeed.
Waxyaabaha la raadinayo
Ardayda waxay galaan manhajka heerka fasalka iyo waxbaridda
Ardaydu waxay akhrinayaan & xisaabta ku sameynayaan heer fasal, celcelis ahaan in ka badan sannad koritaanka tacliinta
Dugsiyada Sare: Boqolkiiba ardayda qalinjabisa ee dhigata (& ka qalin jabiya) kulliyadda
Xulo su'aalaha iyo waxyaabaha aad raadineyso ee aad rabto inaad ka muuqato hagahaaga gaarka ah!
Su'aalaha la weyddiinayo
Sideed ku hubinaysaa in dhammaan ardayda ay ka shaqeeyaan ama ku wajahan yihiin heerarka fasalka?
Xog intee le'eg ayaad ila wadaagi doontaa sanadka oo dhan si aan u ogaado in ilmahaygu ku jiro heerka fasalka iyo in kale?
Maxay yihiin fara-gelintaada ku aaddan ardayda aan aqoonin heerarka gobolka iyo heerka fasalka?
Ma waxaad tahay dariiqa loo maro kulliyadda (booqashada kulliyadda, kasbashada dhibco dugsiga sare ...)? Tilmaamo nocee ah ayaad ku kormeertaa si aad u hubiso in carruurtu ay haystaan jidka?
Manhaj & duruus diiradda la saaray ardayga
Manhajku ma ka tarjumayaa asalka iyo xiisaha ilmahayga? Ma loo baraa qaab iyaga si fiican ugu shaqeeya?
Ardeydu waxay haystaan fursad ay ku doortaan doorashadooda oo ay ogaadaan sida waxbarashadooda loo cabbiray
Qoysasku waxay leeyihiin fursado ay ku fahmaan sida manhajka loo doorto oo loo bixiyo jawaab celin
Macallimiintu waxay u isticmaalaan qiimeynta iyo jawaab celinta inay ku wargeliyaan/wax ka beddelaan waxbarista
Manhajku waa mid ka turjumaya danaha iyo dhaqamada ardayda
Sidee bay macalimiintu u qaabeeyaan qaababka kala duwan ee barashada iyo waafajinta barista?
Sidee manhajkaaga & waxbaristu uga tarjumayaan asalka iyo danaha bulshadaada ardaygaaga? Miyaad shuraako la tahay ururada maxalliga ah & khabiiro?
Maxay yihiin waxbarashadaada gaarka ah & iyo heerarka kahalkalka Dabeecadda Shucuur ahaan ee qowmiyadeed? Sabab?
Sidee macallimiintu u siiyaan jawaab celin ardayda? Sidee ayaad u soo ururinaysaa jawaab celinta ardayda?
Sideed u hubinaysaa in tirada ardayda ee koorsooyinka horumarsan, fasallada magnet ama barnaamijyada kale ee gaarka ah ay muraayad ka yihiin isqorista dugsigaaga?
Barayaal kala duwan, waayo-aragnimo, iyo aqoon dhaqan leh
Macallimiintu miyay muujinayaan aqoonsiyada ardaygayga? Ma fahmayaan dhaqanka ardaygayga, oo khibrad ma u leeyihiin la-shaqaynta ardayda sida tayda oo kale?
Boqolkiiba macalimiinta midabka leh ayaa ka tarjumaya tirakoobka ardayda, hogaaminta iskuul kaladuwanaansho leh
Barayaasha waxay dhammaystiraan tababarada kartida dhaqanka
Sidee macalimiintaada & shaqaalaha kale ay uga tarjumayaan tirada ardaydaada? Maxaad samaynaysaa si aad u hagaajiso lambarkan oo aad u haysato shaqaalaha ka tarjumaya bulshadayda?
Dhammaan macalimiintu ma dhammeystireen tababarka kartida dhaqanka si waafaqsan sharciga gobolka? Waa maxay tababaradu?
Sidee ayaad u caawin kartaa macalimiintu inay noqdaan kuwo si fiican u yaqaan jahawareerka-dhaqanka lawargaliyay horumarinta dhallinyarada, barashada dareenka bulshada ama qaabab kale?
Isgaarsiinta dhaqan ahaan ka jawaabta
Xiriirintu ma ku habboon tahay waxa aan doorbido?
Kulannada la qorsheeyey ee ku saabsan helitaanka waalidka
Turjumaanada & af-celiyayaasha waa habdhaqan caadi ah
Isbeddelka shaqaalaha dugsiga waxaa loo gudbiyaa qoysaska waqtiga dhabta ah
Dugsigaagu ma bixiyaa booqashooyinka guriga ama shirarka qoyska iyo macalimiinta ee bulshada dhexdeeda?
Xafladaha ma bixisaa turjumaano?
Sideebaa qoysaska loo wargeliyaa isbeddelka shaqaalaha inta lagu jiro sannad dugsiyeedka?
Waa siyaabahee & inta jeer ee ay macallimiintu ula xiriiraan qoysaska (sida, wacitaanada wacan, qoraalada luqadaha badan)?
Soodhaweynta dhaqanka iyo jawiga
Miyaan dareemayaa inaan ka tirsanahay dhismaha dugsiga? Miyaan dareemayaa raaxo?
Calaamaduhu waa luuqado badan (xafiiska guud, maktabadda, kafateeriyada)
Guryaha (turjubaano, gaadiidka, daryeelka ilmaha, cuntada)
Tusaalooyinka kala duwanaanta & ka mid noqoshada (tusaale, loogu magac daray himilada dugsiga &/ama qiyam aasaasi ah)
Markaad dugsiga joogto waxaad dareemeysaa diiranaan & soodhaweyn
Sideed u soo dhaweyneysaa jawaab celinta waalidka & uga jawaab celineysaa?
Waa maxay habka loo booqdo fasalka ilmahayga?
Sidee ugu fududeyneysaa qoysaska in ay kaqaybqaataan (gaadiidka, tarjubaanada ...)?
Waa maxay boqolkiiba xaadiritaankaagu?
Ka mid noqoshada qoyska
Ma jiraan fursado macno leh oo laygu darayo dugsiga?
Dugsigu wuxuu leeyahay xiriiriyaha qoyska ama qof masuul ka ah la shaqeynta & udoodidda qoysaska
Dugsiyadu waxay siiyaan qalab qoysaska si ay ula qabsadaan qoysaska kale iyo/ama isku xiraan
Ma kaa caawisaa fududeynta ama ku xoojinta qoysaska si ay u gaaraan midba midka kale, oo ay ku jiraan kuwa laga yaabo inay ku yar tahay ku-hawlanaantu?
Miyaad waalidiinta siisaa helitaanka udoodidda ama tababarka awood-siinta waalidka? Haddii ay haa tahay, waalidku ma ka qaybgalaan?
Qoysasku ma soo jeedin karaan mowduucyo ku saabsan tababarka shaqaalaha?
Miyaad u ogolaataan waalidiinta in ay ku lug yeeshaan horumarinta dugsiga? Sidee?
Anshax cadaalad ah
Ardaygaygu ma u badan yahay in lagu qaado ficil edbin ah jinsiyadooda darteed? Ku dhaqanka edbintu dhaqan ahaan ma ku habboon yahay ardaygayga?
Boqolleyda waxaa lagu soo wargeliyaa qowmiyadda (tusaale, ka joojinta)
Isgaadhsiinta ku salaysan akhlaaqda waxay u nugul yihiin dhibaatooyinka taariikhiga ah, ka fogotaa ereyada kicinta
Miyuu dugsigu u adeegsadaa Dabeecada Dhaqanka-ama wax la mid ah ama wax la mid ah?
Maxaad sameyneysaa si loo yareeyo tirada ficillada edbinta? Miyaad la wadaagtaa ficillada edbinta qaab qowmiyadeed?
Guddi kala duwanaanshaha iyo hoggaaminta
Hoggaanka dugsiga iyo guddiga dugsigu miyay muujinayaan kala duwanaanta ardayda dhigata dugsiga?
Qoysasku waa soo bandhigayaal/khubaro dhaqankooda ah
Waxaa jira gole qoys ama guddi firfircoon
Ma leedahay waalidiin guddigaaga ama golahaaga? Maxay yihiin tirakoobka dadku? Go'aano noocee ah ayay mas'uul ka yihiin?
Waa maxay nidaamka iskaa wax u qabso?
Miyaad haysaa xeerka xuquuqda waalidiinta?
Siyaabo noocee ah ayey qoysaska saameyn ugu yeeshaan go'aamada iskuulka?
Qiyamka iskuulka waxaa dejiya qoysaska
Qoysasku miyay caawiyaan dejinta qiyamka dugsiga & waxay gacan ka geystaan qiimeynta sida iskuulku ula nool yahay iyaga?
Ma jiraa sahan qanacsanaanta qoyska—ku qoran luuqado kala duwan? Sidee u isticmaaleysaa jawaab-celinta?
Maxay tahay siyaasadda iyo nidaamka cabashada qoyska?
Qoysaska & dhaqamadu way isku duuban yihiin (ma wiiqayo qoysaska ama dhaqamada)
Qoysaska iyo barayaasha waxay dejiyeen & / ama kafakiran qiimaha wadajir
Gali Macluumaadka Shakhsi ahaaneed si aad u hesho PDF shakhsi ah
Gali iimaylkaaga iyo/ama lambarka taleefankaaga si aad ugu hesho natiijooyinkaaga qoraal ama emayl.
Iimayl iigu soo dir natiijooyinka?
Qoraal iigu soo dir macluumaadka?
Haddii adeeg bixiyahaagu aanu ka mid ahayn liistadan, fadlan dooro in natiijooyin laguugu soo diro iimayl beddelkeedii. Nala soo xiriir si aad wax uga weydiiso weydiinta adeeg bixiyahaaga..
Fadlan qor lambarka taleefankaaga gacanta, lambarro keliya.